Top 4 Siyaabaha la isu soo ceshano Xiriirada ka iCloud
Sida loo soo ceshano Xiriirada ka iCloud - 4 Siyaabaha Available
Haddii aad ka iPhone tirtiray xiriirada si qalad ah, markaas waxaad iyaga ku soo kabsadaan waa ka iPhone isla markiiba, ama aad weligood lumin doonaa. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad taageeray xiriirada si aad u iCloud hore, ka dibna waxaad isku dayi kartaa xalka soo socda inuu ka soo kabsado xiriirada ka iCloud gurmad file. Hubi faahfaahinta hoose si aad u barato sidii aad u soo ceshano xiriirada ka iCloud.
Xalka 1. Kulanka Xiisaha iyo eegista soo kabsado xiriirada ka gurmad iCloud file (hab fudud) Xalka 2. nidaameed oo dhan xiriirada ka iCloud in aad qalab macruufka ah (qalab macruufka ah ayaa loo baahan yahay) Xalka 3. Soo Celinta qalab macruufka la ah iCloud gurmad file (macruufka ah qalabka loo baahan yahay) Xalka 4. xiriirada dhoofinta iCloud sida file vCard ah si aad u computer (waxtar leh marka uu u dhaqaaqo Android phone)
Xalka 1. Kulanka Xiisaha iyo eegista soo kabsado xiriirada ka iCloud gurmad file
Haddii aad tirtiray qaar ka mid ah xiriirada muhiim ah oo ku saabsan iPhone, halkii ay dib u soo celinta ka ah gurmad iCloud jir, waa in aad dib u soo ceshano kaliya xiriiro loo baahan yahay ka gurmad iCloud jir. Haddii aad ku adkeyso soo celinta aad iPhone, ka dibna laga yaabo in aad lumiso qaar ka mid ah macluumaadka kuwaas oo hadda jira ee ku saabsan iPhone. Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) iskaan doonaa iCloud gurmad file iyo ogolaado in aad ku eegaan xiriiro loo baahan yahay. Ka dibna waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan kuwa loo baahan yahay oo iyaga soo ceshano ka iCloud gurmad file
Marka aad u Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer, guuraan hab kabashada this dusheeda: kabsado iCloud File kaabta. Markaas waa in aad soo gasho la xisaabtaada iCloud.
Tallaabada 2 Download iyo baarista gurmad iCloud xogta ku yaal qalabka Android
Marka aad gasho barnaamijka, lagu ogaan doonaa iCloud files gurmad in aad xisaabta si toos ah. Ka dib markii in, waxaa jiri doona liiska iCloud gurmad files soo bandhigay. Dooro mid aad rabto in aad hesho xiriir ka iyo riix batoonka hoos menu of State si ay u soo bixi. Daaqadda pop-up ka, waxaad dooran kartaa oo kaliya in ay soo bixi xiriiro. Doonistiisa Tani waxay kuu baajinaysaa soo bixi gurmad iCloud faylka mar.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan xiriirada ka iCloud
Scan ka dib, waxaad ku eegaan karo xogta laga soo gurmad iCloud si faahfaahsan. Dooro Xiriirada iyo waxaad eegi kartaa wax kasta si faahfaahsan. Mid aad rabto in aad soo kabsado Sax, oo guji Ladnaansho button iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah. Waa intaas. Waxaad heysanaa xiriirada aad ka iCloud.
Xalka 2. nidaameed oo dhan xiriirada ka iCloud in aad qalab macruufka ah (qalab macruufka ah ayaa loo baahan yahay)
Haddii aad raadineyso weeyna hab lacag la'aan ah, waxaad si toos ah midowdo kartaa dhammaan xiriirada aad gurmad iCloud in qalab aad. Sidaas, waxaad kala socon kartaa xiriirada ku saabsan qalab aad iyo aad u hesho dib dhammaan dadka ay khuseyso in gurmad iCloud ah. Aan hubi sida ay u wada shaqeeyaan.
1. Tag Settings> iCloud ku saabsan qalabka macruufka.
2. Dami Xiriirada.
3. Dooro Hayso on My iPhone on fariin popup ah.
4. Daar Xiriirada.
5. Dooro "midowdo" in ay ku milmaan xiriirada jira kuwa lagu kaydiyaa xisaabtaada iCloud.
6. Ka dib mararka qaarkood, waxaad arki doonaa xiriir cusub ka iCloud on qalab aad.
Xalka 3. Soo Celinta qalab macruufka la ah iCloud gurmad file (qalab macruufka ah ayaa loo baahan yahay)
Si aad u soo celin xiriirada ka iCloud, sidan laguma talinayo. Laakiin haddii aad rabto in la soo celiyo in ka badan xiriiro, ama soo celin in qalab cusub, waa doorasho fiican. Waxay kaa gargaari kartaa in la soo celiyo gurmad oo dhan iCloud in qalabka sida xiriirada, fariimaha, qoraalo, sawiro, iyo ka badan. Bal aynu eegno sida ay u hoos ku shaqaysaa.
Tallaabada 1 masixi All Content iyo Settings
First of dhan, waxaad u baahan tahay in la tirtiro content oo dhan iyo goobaha ku qalab aad: tuubada in Settings> Genaral> celi> masixi All Content iyo Settings.
Tallaabada 2 ceshano xiriirada ka iCloud gurmad file
Markaas qalab aad heli billaabeen doonaa oo idin weydiiyo in qotomiyey. Dooro Soo Celinta ka iCloud kaabta> Sign in aad xisaabta> Dooro gurmad ah si loo soo celiyo.
Xalka 4. xiriirada dhoofinta iCloud sida file vCard si aad u computer ah
Haddii aad ku socoto inay iska ilaawaan aad iPhone waayo telefoonka ah Android ama noocyada kale ee telefoonada, waxaad u baahan tahay oo laga yaabo inay u dhoofiyaan xiriirada ka gurmad iCloud si aad u computer. Apple kuu ogolaanayaa inaad dhoofin xiriirada ka gurmad iCloud sida file vCard ah. Eeg sida loo sameeyo:
Tallaabada 1 Log in iCloud
Daahfurka browser web iyo www.icloud.com furan. Markaas gasho la xisaabtaada iCloud. Ka dibna waxaad arki kartaa Xiriirada .
Tallaabada 2 dhoofinta xiriiro sida file vCard
Guji "Xiriirada" inuu kitaabka kala cinwaanka. Ka dibna riix icon TUBO ee bidixda hoose. In liiska hoos-hoos u, dooro "Dhoofinta vCard ..." Ka dib markii sanaanayaa xiriirada ka iCloud si aad u computer, markaas waxaad isku dayi kartaa Wondershare MobileGo for Android in ay dajiyaan file vCard in telefoonka aad Android.
> Resource > iCloud > iCloud Contact Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada ka iCloud